Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Indostrian'ny fihaonana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Other • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News
Ny hetsika an-tserasera SKAL dia nahazo fanatrehana lehibe indrindra tamin'ny tantaran'ny AGM
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Ny hetsika an-tserasera SKAL dia nahazo fanatrehana lehibe indrindra tamin'ny tantaran'ny AGM
Ny Skål Asia AGM izay noho ny areti-mandringana Covid-19 dia tsy nisy trano, fa kosa ny AGA faha-49 SAA dia natao an-tserasera ary nivadika ho AGM be mpanatrika indrindra tato ho ato.
Filoha Iraisampirenena Skål Peter Morrison, izay nitondra ny laharana nahavariana ny mpanatrika nahitana ny Filoham-pirenena Ranjini Nambiar (INDIA), Wolfgang Grimm (THAILAND), Tsutomu Ishizuka (JAPAN), ary ny solontenan'ny Dr. Elton Tan (PHILIPPINES) ary James Cheng (CHINESE TAIPEI) .
Ny filoha AA mpampiantrano fivoriana Sanjay Datta dia nanokatra ny fihaonana tamim-pankasitrahana ary nampahafantatra haingana ny filohan'izao tontolo izao Peter Morrison izay tamin'ny fomba nentim-paharazana Skål no nanolotra ny toast Skål.
Nandritra ny fanolorana mari-pankasitrahana notarihin'ny filoha teo aloha Richard Hawkins tamin'ny anaran'ny tontolon'ny mpitsara iraisam-pirenena ahitana an'i Uzi Yalon, Gerry Perez, ary Jano Mouawad. Ireo mpandresy dia nambara taorian'ny dinika natao tamim-pitandremana tamin'ny herinandro talohan'ny AGM - ireto manaraka ireto dia mpandresy tamin'ny loka SAA efatra 2020:
Nahazo an'i Asia Club of the Year i Goa izay taratry ny ezaka lehibe nataony tamin'ity taona ity
Ny toetran'ny SKÅL ASIA tamin'ny taona 2020 dia nomena ny filoham-pirenena Robert de Graaff avy any Phuket noho ny fandraisany anjara tamin'ny Skål. Robert dia mpikambana mpanorina ny klioba
Ny mari-pahaizana momba ny tontolo iainana 2020 dia natolotra an'i Anana Ecological Resort Krabi Thailand, noho ny fanolorantenan'izy ireo tamina fahombiazana.
Goa sy Singapore dia nizara ny loka Young Skål Best Club Award 2020. Niala tsiny tamin'ny fifidianana i Richard satria i Singapore no kliobany
Nilaza ny mpitsara fa avo dia avo ny fenitra amin'ity taona ity ary ny mifantina ireo mpandresy no jerena manokana ny zava-bitan'ny fidirana rehetra.
Nandritra ny tolotra ho an'ny kaonferansa 2021, nisy fidirana roa ny iray avy any Srinagar, Kashmir Avaratra India, ary ny iray avy any Bahrain.
Taorian'ny latsa-bato tamin'ny Internet dia nambara fa mpandresy tamin'ny kaongresy tamin'ny taona ho avy i Srinagar.
Intelo no nanao ny Kaongresy tamin'ny taona 1980 (Bombay) i India; 2011 (Delhi) sy 2019 (Bangalore) ary Bahrain inefatra tamin'ny 1983; 1991, 2000, ary 2017.
Mikasika ny taham-pahavitrihana dia nanaiky ny rehetra fa tsara izany.
Ny filoham-pirenena teo aloha Skål Asia Gerry Perez dia nilaza fa “Izaho manokana, tsy tadidiko akory ny fahitako ny hamaroan'ny mpandray anjara ofisialy tao amin'ny Kaongresy Asia”.